Sarin-tsiranoka mihantona miaraka amin'ny fampidirana | mpanamboatra milina fanamafisana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
Ny famolavolan'ny lamosina miaraka amin'ny induction
Tanjona: Mamokatra angadinomby miverimberina ho an'ny fivorian'ny jiron-tsolika. Ny fampangatsiahana ny induction dia ampiasaina mba hahatratrarana tetezana fanamombanana tsara eo amin'ny tetezana an-kibon-dreny, tetezana an-tseza sy ny orona. Ny famafana dia atao amin'ny 1300 ° F ary eo ho eo amin'ny 3-5 segondra dia ahafahana manasitrana. Ny kalitaon'ny rano dia tena manan-danja tokoa satria alefaso amin'ny alàlan'ny alim-bolana ny fanadiovana.
Material: Bridge Bridge with 18% Silver Braze
Fitaovana: DW-UHF-4.5KW ny famokarana herinaratra famokarana herinaratra.
Fomba fanodinana Ny famatsiana herinaratra fampidiran-ketra mafy an'ny DW-UHF-4.5KW dia nampiasaina hahatratrarana ireto valiny manaraka ireto: • Nahatratra 13000 segondra ny mari-pana 3F tamin'ny alàlan'ny fampiasana fihodinana telo, 0.2 ″ ID, coil helical transverse. Ity famolavolana coil ity dia mamela ny fampiharana ny hafanana amin'ny faritra manokana. • Ny lesoka ambonimbony dia tazomina farafahakeliny noho ny fampiasana safo-drano izay misy Hydrogen sy agence inert. Ny Hydrogen dia miasa ho toy ny "fluxing" agents izay manala ny filan'ny flux. Ny gazy tsy mitongilana dia manafoana ny fihanaky ny otrikaina amin'ireo singa vy rehefa mafana ny hafanana. Ireo endri-javatra roa ireo dia mamokatra vokatra vita fa tsy mila fanadiovana aorian'ny famoahana brazing. • Ny fitazanana amin'izao fotoana izao dia azo tazonina noho ny fampiasana hafanana transversif izay mamela ny fanesorana mora foana ny vokatra vita. Valiny Amin'ny ankapobeny, ny fanamainana induction dia nahatanteraka ny tanjona rehetra napetraky ny mpanjifa mba hamokarana tonon-taolana mahomby amin'ny fanamboarana bara-maso.
Sokajy Technologies Tags Famolavolana fakan-drivotry ny induction heater, Fanorotoroana ny lamosina, Ny famolavolan'ny lamosina miaraka amin'ny induction, Hira fijerena ankeriny matetika, RF fakan-drivotra rindrina